Ku Deeq Walxaha - El Centro de la Raza
Hoos waxaa ku qoran liiskayaga rabitaanka ee alaabta aan jeclaan lahayn in aan u helno sida deeq -bixiyeyaasha dadka oo xaalad cusub ku jira. Deeqaha Inkind ayaa naga caawiya inaan hoos u dhigno kharashyadeenna oo aan xoogga saarno kheyraadkeena lacageed baahiyaha ugu weyn ee ka jira El Centro de la Raza iyo bulshada dhexdeeda. Fadlan xoogaa qaado si aad u fiiriso alaabta barnaamijyadeenu hoos ka codsadeen oo arag waxaad bixin karto. Waxa kale oo aad ku bixin kartaa deeq guud onlayn halkan mar kasta.
Haddii aad shay ku deeqday El Centro de la Raza oo aad u baahan tahay rasiid, waad soo dejisan kartaa rasiidka canshuurtaada, halkan.
Geedka Bixinta Fasaxa:
Guji halkan si aad u gasho Liistadayada Wish Amazon
Codsiyada la Xiriira COVID-19:
Maaskaro guriga lagu tolay oo loogu talagalay shaqaalaha safka hore iyo xubnaha bulshada
Sahayda nadiifinta iyo nadiifinta
Xafaayadaha, tirtiridda ilmaha, caanobooraha iyo sahayda kale ee dhallaanka
Kaararka hadiyadda dukaamada raashinka
Kaalmada dhaqaale ee kirada iyo cuntada
Farshaxanka iyo saadka farsamada
Alaabta jikada sida isbuunyada, saabuunta saxanka iyo waxyaabaha kale ee aasaasiga ah
Daryeelka shakhsiyeed/alaabta nadaafadda
Aan dhicin cuntada bangiga cuntada - bariis cad ama bunni ah, pinto ama digir kale, subagga lawska, boorashka degdegga ah, tuna ama digaag qasacadaysan, miro, macaroni sanduuq iyo farmaajo, iyo alaab qasacadaysan ama sanduuq
Deeqaha nasiib darro ma awoodno inaan aqbalno:
Badeecadaha la isticmaalay ama la furay inta badan
Dharka la isticmaalay (hoos ka eeg roobabka roobka ee la aqbali karo)
Alaabta guriga ee la isticmaalay (hoos fiiri alaabta xafiiska ee la aqbali karo)
Alaabta lagu ciyaaro ama buugaag ay ku jiraan hub ama mawduucyo rabshado wata
Alaabta aan hadda aqbalno xaalad CUSUB ama FUDUD:
Awoodda: laptops (aan ka weyneyn 3 sano), kiniinno (aan ka weyneyn 4 sano), meelo kulul (shaqeynaya)
Sahayda dayactirka: dubbaha, makiinadaha, miinshaarrada, qalabka gacanta
dharka: jaakadaha roobka ee dhalinyarada iyo dadka waaweyn
Qalabka Xafiiska: miisaska yaryar, miisaska taagan, armaajooyinka xereynta, kuraasta miiska
Alaabta aan hadda aqbalno XAALADDA CUSUB KALIYA:
Gift Cards dukaamada raashinka sida Target, Safeway, Fred Meyer, QFC, iwm.
Sahayda dayactirka: ciddiyaha
PPE: maaskaro, galoofyo, gacmo nadiifiye
Alaabta nadaafadda shaqsiyeed: saabuun, caday, caday, burush timo, iwm.
Baahiyaha Ilmaha: sariiraha, xafaayadaha, dharka ilmaha, kuraasta lagu riixo, sidayaasha, masaxidda ilmaha, caanaha
Hawlaha Carruurta: Halxiraalaha, buugaagta midabaynta, qalimaanta, baloogyada, alaabta carruurtu ku ciyaarto ee waxbarashada & buugaagta ku qoran Isbaanish, carruurta roboticska (loogu talagalay dhalinyarada)
Ammaanka: ilaali hindhisada ama galaas akril ah xafiisyada
dharka: bustayaasha waayeelka iyo dhallaanka
Qalabka Xafiiska: xabagta buufinta, warqad midab leh, maqas, warqad nuqul cad, qalimaan, Boostada, buraashyada rinjiga, warqadaha sharciga ee huruudda ah, Steno notepads, cajalad, xarig-jibisyo, xaashiyo dhejis ah oo cabbir kasta leh
Sahayda fasalka (cusub): Crayons, buugaagta wax lagu qoro, calaamadaha boorsooyinka dhabarka lagu xardho, rinjiga farta, warqadda dhismaha, warqadda nudaha iyo qalabka kale ee farshaxanka ilmaha
Sahayda Nadiifinta: saabuunta dharka lagu dhaqo, warankiijiyaha, jeermis -dilaha, tirtiridda tirtiridda, Rubber -ka ama gacmo -gashiyada caagga ah, maaskarada boodhka, maaskaro hazmat, saabuunta warshadaha, iwm.
Sahayda rinjiyeynta: burushyada, rollers, tarps/maro-dhibic, iyo cajaladda rinjiyeyaasha buluugga ah.
Beteriyada: AA, AA, D
Sahayda Cuntada & Jikada: Digirta Pinto, bariiska, suugada yaanyada qasacadaysan, miro iyo khudaar daray ah, taarikada warqadaha iyo maddiibadaha, malqacadaha caagga ah, fargeetooyinka, mindiyaha
Haddii aanan hadda aqbalin sheygaaga waxaan kugula talineynaa inaad iska hubiso dhowr urur oo kale ee Seattle. Waa kuwan qaar ka mid ah ilaha degdegga ah:
Eeg ururada lagu taliyey ee Degmada King ee aruuriya dharka, halkan
Si aad baabuur ugu deeqdo Seattle Children's, eeg halkan (jiidis bilaash ah)
Macluumaadka ku saabsan ku -deeqidda alaabta la isticmaalay Wanaagga halkan
Macluumaadka dib -u -warshadaynta joodariga aad isticmaashay ee Bang Furniture Bank halkan
Fadlan soo wac (206) 957-4621 ama email donor@elcentrodelaraza.org si aad u hesho macluumaad dheeraad ah ama aad ugu deeqdo